Knowledge Archives - Page 171 of 182 - Thutazone
ကန်တော်ကြီးပဲလေ့စ်ဟိုတယ်ဟာ ကိုလိုနီခေတ်ကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်းလက်ရာအဆောက်အဦးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆောက်အဦးနေရာဟာ တစ်ချိန်က မွန်ဘုရင်မကြီးရှင်စောပုရဲ့ နောက်ဆုံးအချိန်များမှာ ရွှေတိဂုံဘုရားကို ဖူးမျှော်ရင်း နန်းစံခဲ့တဲ့နေရာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ၁၉၃၄ ခုနှစ်ကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီအချိန်က ရန်ကုန်လှေလှော် ကလပ် (Rangoon Rowing Club) အဖြစ်...
သီပေါမင်း ပါတော်မူပြီး နှစ်ပေါင်း ၂၀ အကြာက ရန်ကုန်
မြန်မာဘုရင် သီပေါမင်းသည် ၁၈၈၅ ခုနှစ်တွင် ပါတော်မူရာ ၁၉၀၀ပြည့်နှစ်အကျော် ရန်ကုန်မြို့၏ အခြေအနေ များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က ရန်ကုန်ကမ်းနားလမ်းတွင် နာရီအချိန်တိတိကျကျ သိမှတ်ရန်အတွက် နေ့ ၁၂ နာရီ တွင် တစ်ကြိမ် ၊...
ယနေ့ကမ္ဘာကြီးဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သန်းပေါင်းများစွာတည်းက တည်ရှိခဲ့ပြီး သက်ရှိများစွာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီသက်ရှိသတ္တဝါတွေထဲမှာ ယနေ့တိုင်မြင်တွေ့နေရဆဲ တိရစ္ဆာန်တွေရှိသလို မမြင်တွေ့နိုင်တော့သော မျိုးတုံးသွားတဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေလည်းများစွာရှိပါတယ်။ မျိုးတုံးသွားတဲ့ တိရစ္ဆာန်လို့ပြောရင် ကျွန်တော်တို့အများဆုံးသိကြတာ ဒိုင်နိုဆောတွေပါ။ အခုလည်း ဒိုင်နိုဆောတွေလိုပဲ မျိုးတုံးသွားကြတဲ့ အခြားတိရစ္ဆာန်တွေအကြောင်းကို သုတဇုန်မိတ်ဆွေများအတွက်...
ယနေ့အခါတွင် လျှပ်စစ်များအလွယ်တကူရလာပြီဖြစ်သဖြင့် အိမ်တိုင်းလိုလိုတွင် မီးများကို နေ့ရောညပါ ထွန်းနေကြပါပြီ။ အိပ်သည့်အခါတွင်လည်း မီးကို မပိတ်တော့ပဲ တစ်ညလုံးထွန်းထားတတ်ကြပါတယ်။ တချို့သူတွေဆိုရင်မီးပိတ်ပြီးတောင်မအိပ်တတ်တော့ပဲ မီးဖွင့်ပြီးအိပ်မှ အိပ်ပျော်တဲ့အကျင့်ရှိတဲ့ အထိဖြစ်ကုန်ပါပြီ။ မီးဖွင့်ပြီး အိပ်ခြင်းဟာ ကျန်းမာရေး နဲ့ ကိုယ်ခံအား စနစ်ကို...
ရှေးအီဂျစ်လူမျိုးတို့သည် လူတစ်ဦးတစ်ယောက် သေဆုံးသွားသောအခါ ထိုသူ၏ ရုပ်အလောင်း မပျက်မစီး၊ မပုပ်မသိုးမှသာလျှင် သေသူ၏ အသက်ဝိညာဉ်သည် နောင်တနေ့သောအခါတွင် ကြွင်းကျန်ခဲ့သော မိမိရုပ်ကလာပ်ထဲသို့ ပြန်ဝင်အသက်ရှင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ထိုသို့ယုံကြည်သည့်အတိုင်း ရုပ်အလောင်းကို မပုပ်မသိုးပဲ ကြာမြင့်စွာ တည်တံ့နိုင်စေမည့် နည်းအမျိုးမျိုးကို...
Written By ဒေါက်တာဦးကိုကို လူအများစုဟာ ရေးနွေးထဲ အဆင်သင့် ထည့်စားရုံ လွယ်ကူတဲ့ ခေါက်ဆွဲခြောက် ထုပ်တွေကို စားသုံးမှု များကြပါ တယ်။ ဒါတွေက ကြာရှည်လည်း အ ထားခံတဲ့အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ တဖြည်း ဖြည်း...
Page 171 of 182 Prev 1 … 170 171 172 … 182 Next